War deg deg: Madaxwaynaha cusub ee Galmudug oo la doortay (Waa Kuma ) | Entertainment and News Site
Home » News » War deg deg: Madaxwaynaha cusub ee Galmudug oo la doortay (Waa Kuma )
War deg deg: Madaxwaynaha cusub ee Galmudug oo la doortay (Waa Kuma )
daajis.com:-Waxaa hada soo dhamaatay Doorashada Madaxwaynaha maamulka Galmudug oo ay Wareega Labaad isugu soo baxeen Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) iyo Axmed Cali Hilowle.
Waxaana Xilka Madaxwayne ee maamulka Galmudug ku guulaystay Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) oo Heley 54cod, isagoo ka guulaystay Musharixii kale ee Axmed Cali Hilowle oo helay 34cod.
Madaxwaynaha Cusub ee Galmudug Wuxuu horey u ahaa Ganacsade aad looga yaqaano goboladan, waxaa uu soo noqday xildhibaan baarlamaan dowladdihii kala danbeeyay ee Soomaaliya soomaray sanadihii (2000 ilaa 2017), doorashadii daddbaneyd ee 51-xubnood ay xildhibaanka dooranayeen, Xeef waa isi soo sharaxay laakiin waa uu waayey.
HALKAN TOOS UGA DAAWO KHUDBADAHA OO SOCDA
Wuxuuna Markaasi kadib Bilaabay Olole ka dhan ah Madaxwaynihii Hore ee Galmudug C.kariim Guuleed, Inkasta oo siweyn saameyn ugu leeyahay ganacsiga , hadana Xeef waa markii ugu horeysay ee uu isu soo sharaxo Madaxweynaha Galmudug, Loona doortay Xilkaasi.
Axmed Ducaale Geele Xaaf oo dhaaranaya , “Waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudunayo si daacad ah oo danta diinta, dadka iyo dalku ku jirto, dhowrayona dastuurka dowladd goboleedka Galmudug iyo kan qaranka , iyo shuruucaha kale ee dalka u yaala. waa bilaahi towfiiq”